विपन्न १०८ घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानो | गोठालो खबर – सूक्ष्म समाचार , डिजिटलको आधार
विपन्न १०८ घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानो
- सबैको घरमा बिजुली
भोजपुर, १ मंसिर २०७८, बुधबार १६:५०
भोजपुर, १ मंसिर । भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ६ कोट फुसको छानोमुक्त बनेको छ । वडाका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई लक्षित गरेर १०८ घरलाई जस्तापाता वितरण गरेसँगै वडा फुसको छानोमुक्त बनेको हो ।
वडा कार्यालयले २० लाख बजेट विनियोजन गरेर ४३ र सहरी विकास कार्यालय अन्तर्गत ६५ गरी १०८ विपन्न घर परिवारले जस्तापाताको छानो पाएको कार्यालयले जनाएको छ । वडा क्षेत्रको सुन्दरतासँगै बस्तीमा एक रुपता ल्याउनको लागि फुसको छानो हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद नेपालले बताए ।
शुरुमा वडा कार्यालयले आफै बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम थालेको भएपनि सरकारले नै फुसको छानो हटाउने अभियान सञ्चालन गरेपछि थप सहज भएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष नेपालले भने,‘ मैले जनतालाई निर्वाचनको बेला दिएको बचन अनुसार अभियान थालेको थिए । वडा कार्यालयले रु. २० लाख विनियोजन गरेर ४३ घरलाई जस्तापाताको छानो दिएका छौँ । पुन ः सहरी विकास कार्यालयबाट थप ६५ गरी यहाँका १०८ घर गरिब तथा विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाउन सफल भएका छौँ ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण वर्षौँ देखि चुहिने फुसको छानोमा बस्दै आएका घर परिवारको लागि अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको वडाध्यक्ष नेपालले बताए ।
वडाध्यक्ष नेपालले भने,‘‘वडाले स्थानीयको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, हुन त हामीसँगै धेरै ठुला ठुला योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट छैन तर पनि स्थानीयको स–साना समस्यालाई बुझेर काम गर्न सकियो भने जनतालाई खुसी बनाउन सकिँदो रहेछ ।’’
वडा कार्यालयले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत्, कृषिका क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको वडाध्यक्ष नेपालले बताए । ‘वडाको सक्रियतामा वडाको सबै ठाउँमा विद्युत् विस्तार भएको छ भने कृषिमा लाग्नेहरूको लागि आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौ, धेरै कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छौँ । सबै टोलहरूमा कृषि सडक खनेका छौँ । पानीको समस्या समाधान गरिएको छ भने सिँचाइको समस्या समाधानको लागि सिँचाइ आयोजना निर्माणको तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ ।’ वडाध्यक्ष नेपालले भने ।
गरिब तथा विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विपन्न लक्षित अन्य कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको वडा कार्यालयको दाबी छ ।आफ्नो क्षेत्रलाई नमूनासंगै व्यवस्थित बनाउन योजनाबद्ध रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको वडा कार्यालयको भनाइ छ । वडा कार्यालयले अभियानको रूपमा फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै स्थानीय नागरिक हर्षित भएका छन् । स्थानीय कृष्ण गिरीले भने,‘वडा कार्यालयले सञ्चालन गरेका धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छन् । वडाको सक्रियतामा वर्षौँदेखि फुसको चुहिने छानोमा बस्दै आएका परिवारलाई लक्षित गरेर जस्तापाताको छानो लगाइदिएको छ । यो निकै राम्रो काम हो । यसले वडावासीको मुहारमा उत्साह थपेको छ ।’
वडाले थोरै बजेटमा भएपनि स्थानीयको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा सन्तुष्ट रहेको अर्की स्थानीय चिनीमाया भारतीले बताइन् । भारतीले भनिन्,‘थोरै बजेटमा भएपनि वडास्तरमा सञ्चालन भएका कामहरू प्रभावकारी छन् । हाम्रा वर्षौँदेखिका धेरै समस्याहरू थिए । ती कामहरू अधिकांश पुरा भएका छन् । वडा कार्यालयले जनताको समस्या तथा आवश्यकताको आधारमा योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ । हाम्रो सबै टोलमा कृषि सडक विस्तार भएको छ । कृषि उपजलाई सहज रूपमा बजारसम्म विक्रीका लागि लैजान सकेका छौँ । यो भन्दा ठूलो आशा के गर्नु र हामी सन्तुष्ट छौँ ।’
सबैको घरमा बिजुली
वडाको सबै घरमा केन्द्रीय विधुत् प्रसारणलाईन विस्तार भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । साबिकमा एक मात्र वडा रहेकोमा देश संघीय संरचनामा गएसँगै यस ठाउँलाई दुई ओटा वडामा विभाजन गरिएको हो । नयाँ वडा कार्यालय स्थापना गरेरपनि जनतालाई चाहे अनुसारको सेवा दिएको वडाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । अहिले वडा परिसरमा स्वास्थ्य कार्यालयको स्थापना भएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष नेपालले भने, ‘यो निकै ठुलो भूगोल भएकाले दुई वटा वडामा विभाजन गरेर जनतालाई सेवा दिएका छौँ । अहिले नयाँ संरचना भएकाले स्थापना कालमा धेरै चुनौती थिए । तर अहिले एउटा व्यवस्थित वडा स्थापना गर्न सफल भएका छौँ ।’
भौगोलिक विकटताका कारण विद्युत् विस्तारको लागि एक परिवारको लागि रु. पाँच लाखसम्म खर्च भएको उनको भनाइ छ । वडाका सबै घरमा विधुत् विस्तार भएपनि नियमित विधुत् नआउँदा भने स्थानीयले समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले वडामा विधुत् विस्तार गर्न सफल भएका छौँ । विधुत् विस्तार भएपछि यो ठाउँ प्रविधिमैत्री भएको छ । तर विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण जनता सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । वडावासीले ठुलो त्याग गरेर दुई ओटा विधुत् गृह सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गरेका छन् । उनीहरूको खेत बाँझिएको छ’ उनले भने, ‘तर ती विधुत् गृहबाट उत्पादन भएको विधुत् हाम्रा जनताले किन उपभोग गर्न नपाउने ? यसको लागि सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ । यो समस्याको विषयमा जानकारी गराउन मेरो वडा क्षेत्रको गुम्बामा सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर जनताले भोगेका समस्याको विषयमा जानकारी गराउने तयारीमा छु’।
हालसम्म वडा नम्बर ६ कोट, वडा नम्बर ४ नागी र वडा नम्बर ३ अन्नपूर्ण पूर्णरुपमा फुसको छानोमुक्त भएका छन् भने वडा नं. ५ खावा, वडा ७ कोट र ८ गोगनेमा पनि अभियान सञ्चालन भइरहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवराज राईले भने, ‘हामीले जनताको आवश्यकता अनुसारका आयोजना सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । तीन ओटा वडा पूर्णरुपमा फुसको छानोमुक्त भएका छन् । अन्य तीन वडामा पनि फुसको छानो हटाउने अभियान चलिरहेको छ । हाम्रो गाउँपालिकाको नौ वटै वडामा विधुत् विस्तार भइसकेको छ । यो भनेको मेरो नेतृत्वमा रहेको गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मेहनतको फल हो । हामी प्रदेश १ मा पूर्ण उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्न सफल भइसकेका छौँ ।’